नेपाल सन्दर्भ : डा. प्रदीप भट्टराई
डा. बाबुरामको नयाँ शक्तिमा पर्न हिसिलाले तेस्रो सूची पर्खनु पर्‍यो । नपर्दा पनि मानिसले भने, अझै हिसिला परिनन् । पर्दा पनि मान्छेहरूले भने, आखिर परिछाडिन् । नेपाली समाज यस्तो समाज हो जहाँ दायाँबाट हिड्यो भने किन दाँयाबाट हिडिस् भनेर सोधिन्छ । दायाँबाट हिड्नु नहुने रहेछ भनेर बाँयाबाट हिड्यो भने पनि किन बाँयाबाट हिडिस् भनेर प्रश्न गरिन्छ । हिसिलाका बारेमा पनि यो समाज फरक छैन, उस्तै हो ।
‘सफ्ट-सेल’ नेपालीका ‘हार्ड-सेल’ कुरा
वास्तवमा हामी या त सिद्धान्त नै जान्दैनौ या जाने पनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदैनौ । कसैले त्यसबारेमा कुरा उप्कायो कि धारेहात लगाएर ‘साइबर-बुलिंग’ या ‘सटर-जर्नालिज्म’ सुरु गरिहाल्छौं । यसैले मलाई आफूले जानेकोे कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा बाँड्न डर लाग्छ । तथ्य र तर्कका आधारमा आएका क्रिया/प्रतिक्रिया त सञ्चार प्रक्रियाको सातौं अंग नै हुन्, स्वीकार्नुपर्छ ।
नाइन इलेवेन : हामी कहिल्यै भुल्दैनौं
नाइन इलेवेनको १४औं स्मृतिसभामा करिव एकहजार आफन्त र सर्वसाधारण भेला भएर यो तीतो घटनाको नमिठो स्मरण गरे । आफ्ना दिवंगत आफन्तको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै मौनधारण गरे र घटनामा जीवन गुमाएका तीनहजार मानिसहरुको नाम पढे । कार्यक्रममा सहभागी आफन्तजनहरु भक्कानिए, रोए र आँसुले पीडा पखाले ।
टीपीएस : मिल्ला त बिछोडिएको नेपाली गला ?
एनआरएन एनसीसी चुनाव :
बन्ला त नेपाल करोडौंको स्वर्ग ?
भो अति भो, कति दोष दिनु सतीलाई ?
तीतो सत्य, भाइरल र मोदी म्युट
मोदीको मोफसल भ्रमण
कति गर्छौ हँ, हाम्रो सपनाको हत्या ?
अति भो, कति बन्नु
मुखमा तीन 'स'- बगलीमा-'म'
कहाँ छ ज्ञानेन्द्रमा बाबुपन ?
यो कस्तो न्याय ?
तेस्रो अंगको आंगनमा लैलै, चौथो अंगको रोपाइँ
Results3: You are at page 1 of 3